ALSHAHID oo Aqoon is waydaarsigii Labaad mudo Bil ka yar kusoo gaba-gabeeysay Muqdisho (Sawirro) | Shabakada Alshahid
Saved under Faaqidaad, Horumar, Muuji, Warar, Warbixin
Mogadishu (Alshahid)- Waxaa maalintii Khamiista ee lasoo dhaafay Hoolka Shirarka ee Xafiiska Xarunta Alshahid ay ku leedahay Muqdisho lagusoo gaba-gabeeyay Aqoon is waydaarsi Laba maalin socday oo ku saabsanaa Qorsheynta Istaraatiijiyadeed iyo sida loo diyaariyo.
Aqoon is waydaarsiga waxaa kasoo qayb galay tiro ka mid ah Bahda Waxbarashada Somalia oo isugu jirtay Arday iyo aqoonyahanno kale. Waxaana wehlinayay mas’uuliyiin Hay’adaha Bulshada Rayidka u shaqeeya ka tirsan iyo Marti-sharaf kale.
Maalintii koobaad ee aqoon-is-waydaarsiga la furay oo Arbacada ahayd waxaa Cashar waqti dheer socday si waynna ay ka qayb galayaashu ugu riyaaqeen soo jeediyay Bile Diiriye Cusmaan oo ka mida Barayaashaa wax ka dhiga Jaamacadaha Muqdisho.
Malintii ku xigtayna waxaa la guda galay qaybtii ka hartay Siminaarka oo uu ku qornaa Ustaad Mohamed Abdullahi Goosaar. Wuxuuna Ustaad Goosaar oo ka tirsan Howl-wadeenka Telefishinka Al-Jazeera Xafiiskooda Somalia kusoo bandhigay Darisgiisa macluumaad badan oo barnaamijkii Siminaarku ka hadlayay quseeya.
Markii Duruustu ay soo idlaatay ka dib waxaa halkaas hadalo gaba-gabayn ah ka jeediyay Marti-sharaf dhowr ah oo uu ku jiray Sheikh Maxamed Cumar Barre oo ka socday Hay’adda Al-Cawn ee gargaarka ka shaqeeysa iyo Ustaad Saalax Dhiblaaw oo Xarunta Afaaq ee howlaha Warbaahinta ka shaqaysa gudoomiye ka ah.
Sidoo kale gaba-gabadii Siminaarka waxaa hadal ka jeediyay Ustaad Anwar Axmed Mayow oo matalayay Akaadeemiyadda Culuumta iyo Tiknooloojiyadda ee Wadaniga ah. Waxayna xubnahani dhamaantood si wayn ugu mahadceliyeen Xarunta Alshahid ee soo qaban-qaabisay Siminaarkan iyo kuwo kale oo horay loo qabtay.
Martida hadashay waxay kaloo ku dhiirigaliyeen ka qaybgalayaashii Siminaarka inay qaataan Duruustii ay halkan ku barteen kuna dadaalaan sidii ay u dhaqan-galin lahaayeen si taas ay wax badan uga badasho nolosha bulshada Soomaaliyeed. Waxayna sidoo kale wax aad u muhiim ah ku sheegeen qodobada Siminaarka looga hadlayay ee ahaa Qorsheynta Istaraatiijiyadeed iyo arrimaha la jaalka ah.
Intaas ka dib waxaa hadal gaba-gabayn ah jeediyay maamulaha Xarunta Alshahid qaybteeda Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Mohamed Tuuryare. Wuxuuna maamuluhu u mahadcelinta ka qaybgalayaasha iyo boogaadintooda ka dib uu ku nuux-nuuxsaday in Xaruntu ay qorsheyneyso qabashada Kulamo ceynkan ah oo dhawaan imaan doona.
Waxaa kaloo xusid mudan in gaba-gabadii Barnaamijkan, Shahaadooyin la gudoonsiiyay qaar ka mid ah Wariyayaal ka qayb galay Siminaar midkan ka horeeyay oo Todobaadyo ka hor Xarunta AlSHAHID lagu qabtay.
Alshahid oo ah Xarun ka shaqaysa Cilmi-baarista iyo Diraasaadka Saxaafadda ayaa caan ku noqotay qabashada Kulamo aqooneed oo ay kasoo qayb galayaan dadka wax-galka u ah bulshada si loo helo fursado la isku dhaafsado aragtiyo ku salaysan hadba arrimaha markaas la is oran karo muhiimad gaar ah bay u leeyihiin umadda Soomaaliyeed.
In badan oo ka mid ah dadkii horay uga qayb galay Kulamadan ay Alshahid qabatana waxay boogaadin iyo mahadcelin u jeediyeen Xaruntan oo ay ku sheegeen mid ka dhex muuqanaysa Xarumaha iyada la shaqada ah ee dalka ka jira amaba kuwa Caalamkaba.